China Paddy Seed Processing Plant milina fanadiovana voa fanadiovana maso mpanamboatra sy mpamatsy | SYNMEC
Telefaonina: +86 311 67663887
Mpanadio voa sy mpanala
Machine fanadiovana sy fanodinana voa
Fanadiovana voa tsara
Masinina fanosorana voa
Rafitra mizana entana
Elevator sy Conveyeur
milina fanosotra tsaramaso
Amponga mialoha fanadiovana
Fitaovana masomboly laboratoara
Tsipika fanodinana voa
Ozinina fanodinana masomboly finday
Orinasa fanadiovana voamaina sy tsaramaso
Ozinina fanodinana voa
5XZC-7.5DS mpanadio voa ...
Fanadiovana sy fomba fiasa...
5X-12 mpanadio voa tsara/g...
5XZ-6 Separator Gravity
Masinina fanadiovana voamaina tsipika fanadiovana voa
Ny SYNMEC dia manolotra orinasa fanodinana voa namboarina ho an'ny fangatahana vokatra avo lenta amin'ny fanodinana voa isan-karazany. Ny fametrahana eny an-toerana sy ny serivisy fanofanana eo anoloana dia misy ho an'ny mpanjifa. Manana traikefa be dia be amin'ny fametrahana sy fanitsiana ny fe-potoana ara-teknika anay. Ny orinasa fanodinana masomboly SYNMEC dia miasa amin'ny kaontinanta dimy ankehitriny.
10T/H Orinasa fanodinana voa hordea any Aostralia
Tamin'ny taona 2012, mpanjifa Aostraliana iray no manao baiko avy amin'ny orinasanay. Te-hanadio vary orza, varimbazaha, voan-katsaka izy ary hamidy amin'ny marika amin'ny farany. Nanana milina fanosorana masomboly manokana izy ka milina hafa no omenay azy.
Ity tsipika fanadiovana ity dia ahitana:
1.5X-12 Fanadiovana voa tsara: mpanadio voa karazana Cimbria izay afaka manala ny vovoka, ny loto maivana, ny habe ary ny tsy fahampian'ny loto.
2.5XZ-10 gravity separator: American Oliver karazana izay afaka manala ampahany nohanina, tsy matotra, bibikely simba sy marary voa.
3. milina fanaovana kitapo DCS-50B: Fenoy ny voamaina amin'ny kitapo (10-50 kg isaky ny kitapo)
Fizarana hafa: fanadiovana rivotra sy rafitra fanesorana vovoka ivelany
Fandrafetana ny zava-maniry
Boaty fanaraha-maso herinaratra avo lenta miaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena.
1. 5XZP Drum karazana mialoha fanadiovana
2. 5XTB-5 Grain Debearder
3. 5X-5 mpanadio voa tsara
4. 5XWT-6 Separator hateviny
5. 5XZ-6 Separator Gravity
6. 5BY-5B voa coating milina
7. DCS-50B Bagging machi
Fanadiovana voa tsara 5X-12:
Ny andiany 5X Fine Seed Cleaner dia milina manerantany mifanentana tsara amin'ny fanadiovana mialoha sy tsara amin'ny karazana voa sy voa maro samihafa.
Ny endrika manara-penitra an'ilay milina dia omena miaraka amin'ireo singa mialoha sy aorian'ny suction. Ny fanovana efijery haingana avy amin'ny fanadiovana mialoha ho fanadiovana tsara ataon'ny mpandraharaha dia manampy amin'ny fanatsarana ny asa fanadiovana. Ny mpanadio voa andiany 5X dia milina tena mifaninana, na eo amin'ny vidiny sy ny fahafaha-manao ary ny fiasa sy ny fiasa.
Ny teknôlôjian'ny milina dia voasedra tsara, izay azo voarakitra an-tsoratra avy amin'ny references maro manerana izao tontolo izao.
Izy io dia manana tahan'ny fanadiovana avo ary azo ampiasaina betsaka amin'ny fanodinana varimbazaha, vary, katsaka, vary orza, peas ary voa maro hafa koa ampiasaina amin'ny fanadiovana varimbazaha rehetra.
refy (L × W × H) 3720 × 1750 × 4060 mm
Lanja manontolo 3600 kg
fahafaha-manao naoty 10 t/h
Haben'ny rivotra amin'ny ankapobeny 8200 m3
Fitofana rivotra ivelany 4-72N0-6A, 7,5 kW
Vibration sieve maotera (motera fitaovana) 2,2 kW
maotera rafitra fanandratana lamosina 3,0 kW
Motera mamahana 1,5 kW
Hery tanteraka 6,7 kW
Haben'ny efijery (L×W) 800 × 1250 mm
Layers sy isa 5 sosona, 15 sekely
5XZ-10 Separator Gravity
5XZ-10 gravity separator dia ampiasaina hanasarahana ny vokatra misy fahasamihafana amin'ny lanjany manokana.
Ny Gravity Separator dia endrika amerikanina manara-penitra avo lenta, ary manana tsokan-drivotra mangina 6 indented (matetika amin'ny vata fampangatsiahana), ary afaka mivoaka avy amin'ny fivoahany farany ihany koa ny voa avy amin'ny sisiny.
teo aloha: China Supplier Sorghum Cleaning Line - 5M-2 Mobile Processing Plant – SYNMEC
Manaraka: Orinasa fanadiovana voamaina sy tsaramaso
Tsipika fanadiovana voa
5XZC-5DH mpanadio voa sy mpanakitra
5XQS-L laboratoara destoner ho an'ny masomboly anana ...
DCS-S bagging scale rafitra voamadinika fonosana b...
5xzs-10d milina fanadiovana sy fanodinana voa
5XQS-10 Destoner ho an'ny vary soja sesame ...
Fihintsanana ascenseur fehin-kibo conveyor milina fanandratana vary